MAQAAL: Puntland Dhagtu Waa ay Taagan Tahay? – Puntlandtimes
MAQAAL: Puntland Dhagtu Waa ay Taagan Tahay?
Kuwa hada jooga waxaa loo yaqaan CAYAAL SOCIAL MEDIA. Xaga aqoon xumida, waaayo aragnimo la’aanta, damaca waalan, boobka iyo hanti urursiga waxay kala siman yihiin AARAN JAAN, balse waa dad aad uga dabacsan xaga dabeecada oo aan laheyn cagajugleen iyo cabsigalintii AARAN JAAN lagu yiqiin.
Hada waxay xusul duub ugu jiraan sidii madaxweyne GAAS ugu darsan lahaa ama markale usoo noqon lahaa wado kasta ha umaree. Meelkasta madaxweyne GAAS ka khudbeynayo waxa ay kudiyaariyaan rag iyo dumar ay soo xusheen oo meesha kasheega madaxweynaha in dadku ladhacsanyahay hogaankiisa ayna rajeynayaan in uu sii joogo iyagoo aad ufahamsan sida madaxweyne GAAS uu amaanta uugu nugul yahay.